🥇 Mmemme maka ụlọ akwụkwọ egwuregwu
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 851
Mmemme maka ụlọ akwụkwọ egwuregwu
Vidio nke mmemme maka ụlọ akwụkwọ egwuregwu
Dezie mmemme maka ụlọ akwụkwọ egwuregwu
Na-arụ ọrụ na mmemme dị iche iche, ị nwere ohere ị nwere mgbagwoju anya mgbe niile, yana, n'ihi ya, ọ na-adị mfe ịrụ ọrụ nke ụlọ akwụkwọ egwuregwu. Anyị niile na-achọ otu mmemme ụlọ akwụkwọ egwuregwu zuru ụwa ọnụ, nke ga-enwe ọrụ niile nke nyocha ụlọ akwụkwọ egwuregwu. USU-Soft bụ mmemme ụlọ akwụkwọ egwuregwu, ezubere iji rụọ ọrụ dị iche iche a ga-eji rụọ ọrụ nke ụlọ ọrụ dị otú a. Enwere ike ịme njikwa nke ụlọ akwụkwọ egwuregwu na enyemaka nke ọtụtụ ohere na ọrụ nke mmemme na njikwa, na-achịkwa ihe omume ọ bụla iche. Udo nke iji usoro ihe omume nke ụlọ akwụkwọ egwuregwu dị na interface dị mfe, nke ị ga-eji naanị taabụ 3 isi: modulu, akwụkwọ ndekọ na akụkọ.
Akpaaka nke ụlọ akwụkwọ egwuregwu bụ nnukwu ihe ga-eme n'ọdịnihu. N'ụlọ akwụkwọ egwuregwu ị kewara ihe ndị ị na-eme na oge abụọ na otu oge, dị ka akụkọ gbasara ego kwa ọnwa. Njikwa nke ụlọ akwụkwọ egwuregwu chọrọ nlebara anya. Ozugbo ị dejupụtara ozi ịchọrọ, ị na-adị mfe dejupụta usoro, atụmatụ, ma ọ bụ akụkọ ọ bụla. Usoro mmemme na njikwa nke ụlọ akwụkwọ egwuregwu na-akpaghị aka. Ebe ị mepụtara ihe ọmụma data otu oge, ị ga - enweta nchịkọta ọ bụla, atụmatụ ma ọ bụ usoro ihe omume ọ bụla nke usoro nchịkwa akpaaka na-arụ ọrụ na-akpaghị aka na nke abụọ! A na-ahazi njikwa nke ụlọ akwụkwọ egwuregwu mgbe ịmalitere iji mmemme a nke njikwa mma na mmepe nzukọ azụmahịa. Mmemme nke ụlọ akwụkwọ egwuregwu na-abụ onye enyemaka dị ukwuu na mkpebi na omume gị! Enweghị ihe mgbagwoju anya na njikwa nke ụlọ akwụkwọ egwuregwu na mmemme. Usoro nyocha nke USU-Soft na-enyere gị aka ịnagide mmemme nke ụlọ akwụkwọ egwuregwu naanị, ngwa ngwa, ngwa ngwa!
Also na-ejikwa mmemme kọmputa ọ bụghị naanị na mpaghara gị, kamakwa site na netwọk. Nke a bara uru maka ma ndị njikwa ma ndị ọrụ - a jikọtara ọrụ nke ngalaba alaka ahụ, ị jikọọ na nchekwa data ma rụọ ọrụ ahụ site na ebe ọ bụla n'ụwa. Onye ọ bụla nwere ike ịrụ ọrụ na mmemme ahụ n'ihi na a na-echepụta nkọwa niile dị na sistemụ sistemụ. Enwere ike ịmebe mmemme maka ụlọ akwụkwọ egwuregwu na uto nke gị - enwere ihe karịrị isiokwu iri ise dị. Imeziwanye ihe oyiyi nke ụlọ ọrụ na-adị mfe ndokwa ma ọ bụrụ na ị na-ekpebi wụnye a management ajụjụ omume. Ọ na-eme ka nnweta, izi ezi na izu ezu nke ozi niile na-eme ka ọ dị mfe ijikwa ụdị ọzụzụ na omume dị iche iche na ngalaba ahụike gị. Akụkọ gbasara ego gbasara gị ụlọ ọrụ na-enyere aka ịhazi ọrụ nzukọ a ma kpalie ndị ọrụ nke ngalaba ahịa ahụ. Akpaaka na-enyere aka izere mmejọ na-atọ ọchị metụtara mmetụta nke ihe mmadụ na-eme ma nwekwuo arụmọrụ na njikwa nke njikwa. Na-eme atụmatụ na njikwa na ụlọ ọrụ gị, ọ dị ezigbo mkpa ịrụ ọrụ na njirimara ahụ. Enwere ike itinye akara ngosi ụlọ ọrụ gị na windo isi nke sistemụ ahụ, a ga-egosipụta ya na akụkọ niile na akwụkwọ edere na USU-Soft. Ngwa ahụ na-agbakwunye akara ngosi na nkọwapụta nke ebe ahụike gị na akụkọ ọ bụla, nke ị mebere. Usoro nlekọta njikwa nwere ọtụtụ windo interface na mfe iji ọrụ.
Mgbe ị na-arụ ọrụ na USU-Soft, ị nwere ike ịgbanwe n'etiti windo site na taabụ ndị dị na ala ihuenyo ahụ. Anyị na-enye ụdị agwa dị ka nnabata na ịdị mma nke oghere ọrụ anyị. Nwere ike zoo nke ọ bụla n'ime kọlụm na tebụl ọ bụla na ịpị ole na ole iji mee ka ọrụ gị dịkwuo mma ma kpochapụ oghere ndị ị na-ejighị. Mmemme akpaaka nke nlekota ndị ọrụ na ihe ịga nke ọma na-enye onye ọrụ ohere ịgbanwe usoro nke ogidi ahụ n'ụzọ dị mfe - nke a na-eme site na ịdọrọ na dobe na cursor òké. Ngwa ahụ nwere ike ịhazie obosara nke ogidi ahụ n'ụzọ dị mfe. Enwere ike iji sọftụwia ahụ maka ebumnuche ahịa - na ntọala ị nwere ike ịgbanwe ọ bụghị naanị akara ngosi kamakwa aha, nkọwa na ozi kọntaktị. Na ya ị nwere ike ịchekwa oge na ijupụta na kaadị ndị ahịa - naanị detuo ntinye nke dịtụ iche na nke ịchọrọ ịbanye, gbanwee mpaghara achọrọ ma chekwaa ya. Na nchịkọta nhọrọ, onye ọrụ ahụ hụrụ ngalaba atọ - Akụkọ, Modul, Akwụkwọ ndekọ aha.
Edere akwụkwọ ndekọ aha naanị otu ugboro, ndị ọrụ nchịkwa (ndị nchịkwa ma ọ bụ njikwa) na-eji akụkọ ahụ eme ihe, a na-ejikwa Modul ahụ arụ ọrụ kwa ụbọchị. Ọnụ ọgụgụ nke ọmụmụ e kere na sistemụ nwere oke site na ebe nchekwa dị na ikike nke ebe egwuregwu gị. Akpaaka ga-eme n'ọdịnihu! Iji nwekwuo asọmpi ma zere ndị niile na-agba mbọ, azụmahịa gị ga-achọ ezigbo mmemme iji kọwaa maka omume niile emere na nzukọ gị. Anyị na-adụ gị ọdụ mmemme USU-Soft, nke a ghọtara dị ka otu n'ime mmemme kacha mma site na ụkpụrụ ụwa.
Iji nwee obi ụtọ na nzube nke ndụ, mmadụ kwesịrị ime ihe ndị na-eme ka ọ zuru ike na nke na-eme ka uche mmadụ dị jụụ. Ihe ndị a nwere ike ịdị iche, mana enwere otu, agbanyeghị, nke zuru ụwa ọnụ ma nwee ike ikwu maka onye ọ bụla nọ n'ụwa: mmega egwuregwu. Ọ na-eme ka anyị nwee mmetụta na anyị dị ndụ ma na-achịkwa ahụ anyị. Dika otutu gyms di taa, ulo akwukwo egwuru-egwu a choro ihe nke g’enye ya uru na uru nile. USU-Soft nwere ike ịghọ otu n'ime ha, n'ihi na ọ bụ njirimara niile dị mkpa maka nke a.
Egwuregwu na ihe omume
Na-aza ajụjụ maka klọb ahụ mma
Gụ akwụkwọ maka ụlọ egwuregwu
Za ajụjụ maka klaasị otu ụlọ akwụkwọ egwuregwu
Za ajụjụ maka egwuregwu
Na-aza ajụjụ maka ọdọ mmiri
aza ajụjụ na ahụ ike
Journal Accounting na nkuzi egwuregwu
Akaụntụ nke ọzụzụ egwuregwu
Ajụjụ maka nkuzi otu
Akaụntụ nke tiketi oge
Usoro mmemme maka mgbatị ahụ
Akpaaka maka ụlọ egwuregwu
Na-achịkwa n'ime ụlọ akwụkwọ egwuregwu
Njikwa nke nzukọ egwuregwu
Njikwa nke ọzụzụ
Njikwa klọọkụ ahụ
Akwukwo iku akwukwo banyere akwukwo
Nlekọta nke ọgbakọ ahụ ike
Ijikwa ụlọ egwuregwu
Mmemme maka ịhazi klọọkụ ahụ ike
Mmemme maka klọb ịgba ọgụ
Mmemme maka klọb mma
Mmemme maka ime ụlọ dị mma
Mmemme maka ebe egwuregwu
Mmemme maka ụlọ ịgba egwu
Ihe omume umuaka n’etiti
Mmemme ụmụaka ụlọ ọgbakọ
Mmemme maka kaadị plastik
Mmemme maka ọdọ mmiri
Mmemme maka tiketi maka oge
Mmemme maka nzukọ egwuregwu
Mmemme maka ngalaba egwuregwu
Mmemme maka kaadị klọb
Mmemme maka mgbatị ahụ
Mmemme maka mmezi ego
Egwuregwu agụkọ egwuregwu
Mmemme mmefu ego
ajụjụ ụlọ ọgbakọ egwuregwu
Egwuregwu ike egwuregwu
njikwa egwuregwu egwuregwu siri ike
Egwuregwu nzukọ akaụntụ
Njikwa ụlọ akwụkwọ egwuregwu
Lozọ nkuzi logbook
Iji kaadị plastik
Ọrụ ndekọ ego